Cusbooneysiinta Turks iyo Caicos Islands Shuruudaha Safarka ee TCI
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Turks iyo Caicos Breaking News » Cusbooneysiinta Turks iyo Caicos Islands Shuruudaha Safarka ee TCI
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Turks iyo Caicos Breaking News • Wararka kala duwan
Socotada waxaa looga baahan doonaa inay qaataan COVID-19 RT-PCR, NAA, RNA ama Antigen Test muddo saddex maalmood gudahood ah safarkooda.
Taariikhda qaadista muunadda waa inay ahaato saddex maalmood gudahood (72 saacadood) taariikhda safarka.
Tijaabada waa in lagu sameeyaa shaybaar caafimaad oo leh mid ka mid ah aqoonsiyada soo socda: oo ay aqoonsan tahay Kuliyadda Dhakhaatiirta Cudurrada Maraykanka (CAP); ka diiwaangashan Wax-ka-beddelka Horumarinta Sheybaarka Caafimaadka (CLIA); Shahaadada ISO 15189.
Tijaabooyinka antibody iyo natiijooyinka xirmooyinka tijaabada guriga ku saleysan lama aqbali doono.
The Turkiga oo Caicos Islands waxay ku dhawaaqeysaa cusbooneysiin ku saabsan shuruudaha safarka ee halka loo socdo iyada oo qayb ka ah TCI Assured, barnaamij hubin tayo sare leh iyo boggaga, kaas oo looga baahan doono dhammaan socotada inay soo bandhigaan natiijo diidmo ah COVID-19 RT-PCR, NAA, RNA ama Antigen natiijada Imtixaan lagu qaado saddex maalmood gudahood safarka, laga bilaabo Julaay 28, 2021.
Taariikhda qaadista muunadda waa inay ahaataa saddex maalmood gudahood (72 saacadood) taariikhda safarka, taas oo laga dhimay shuruuddii hore ee imtixaanka ee lagu qaadi jiray shan maalmood gudahood markii la yimaado, iyo Xisaabiyaha Taariikhda Imtixaanka ee bogga TCI Assured ka caawi dadka safarka ah go'aaminta goorta ay imtixaanka galayaan.
Wax ka beddelka la oggolaaday ee Xeerarka Nadiifinta Caafimaadka ee Imaanaya Rakaabka ayaa sidoo kale dhaqan galaya Luulyo 28 waxaa ka mid ah aqbalaadda Tijaabooyinka Falcelinta Chain ee 'Reme Transcription Polymerase Chain Reaction Reviews' (RT-PCR) Imtixaannada Kicinta Acid Nucleic Acid (NAA); RNA ama tijaabooyinka moodeelka; iyo tijaabooyinka Antigen ee gelitaanka Turks iyo Caicos Islands.
Tijaabada waa in lagu sameeyaa shaybaar caafimaad oo leh mid ka mid ah aqoonsiyada soo socda: waxaa aqoonsan Kulliyadda Cilmiga Baahiyaha Mareykanka (CAP); ka diiwaangashan Wax-ka-beddelka Horumarinta Sheybaarka Caafimaadka (CLIA); Shahaadada ISO 15189. Markii hore, meeshii loo socday waxay aqbali jirtay oo keliya imtixaannada RT-PCR. Tijaabooyinka antibody iyo natiijooyinka xirmooyinka tijaabada guriga ku saleysan lama aqbali doono.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan si nabadgelyo leh u soo dhaweynay safrayaasha dalkeenna quruxda badan ee Turks iyo Caicos Islands sanadkii la soo dhaafay waxaanna cusbooneysiineynaa shuruudaha safarka si loo hubiyo feejignaanta socota iyo tixgelinta waxtarka iyo dib-u-habeynta tijaabooyinka la heli karo ee COVID-19," ayay tiri Honorable Josephine Connolly, Wasiirka Dalxiiska ee Turks iyo Caicos Islands. “In ka badan boqolkiiba 60 dadka qaangaarka ah ee ku nool Jasiiradaha Turkiga iyo Caicos ayaa si buuxda loo tallaalay, taasoo naga dhigeysa mid ka mid ah dalalka ugu tallaalka badan adduunka; oo ay weheliso barnaamijkeenna cusbooneysiinta ee TCI Assured, waxaan ku kalsoonahay wanaagga guud ee bulshooyinkayaga iyo booqdayaasha maadaama safarka loogu tagayo halka loo socdo uu sii socdo.
Iyada oo qayb ka ah TCI Assured, oo loogu talo galay dadka safarka ah tan iyo bishii Luulyo 22, 2020, markii ay u furaysay xuduudaheeda dalxiisayaasha, safrayaashu waa inay sidoo kale haystaan ​​caymis caafimaad / safar oo daboolaya medevac (shirkadaha caymiska bixiya caymiska shuruudaha ayaa sidoo kale la heli doonaa bogga,), foomka su'aalaha baaritaanka caafimaadka oo dhameystiran, iyo caddeyn ay aqriyeen oo ay oggolaadeen dukumintiga siyaasadda asturnaanta. Shuruudahaani waa inay ahaadaan kuwo dhameystiran lana galiyaa barxadda TCI ee la hubo, oo laga heli karo barta internetka Websaydhka Guddiga Dalxiiska Jasiiradaha Turk iyo Caicos imaanshahooda ka hor.
Jasiiradaha Turks iyo Caicos waxay ahaayeen kuwo feejigan oo iswaafajinaya shuruudaha socdaalkooda ee caalamiga ah, kuwaas oo lamid ah kuwa safarka ah ee la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin. Sababtaas awgeed, meesha loo socdo waxay ka heshay Heer Heegan 1 Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC). Tani waxay ka dhigan tahay guul muhiim ah ololaha tallaalka ee Turks iyo Caicos Islands, oo bilaabmay Janaayo 2021 waxayna keentay in ka badan boqolkiiba 60 dadka qaangaarka ah in si buuxda loogu tallaalay tallaalka Pfizer-BioNTech - taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah waddamada ugu tallaalka badan. adduunka.